Indlela yokuphila yeLizwe leVintage yeKhaya i-1 iyure ukusuka eCochin
Ndifumene iSuperhost ka-6 ngokulandelelana. Indawo yam yokuhlala ivunyiwe nguRhulumente waseKerala , njengendawo 'yeDayimane' (iKlasi A) yokuhlala ekhaya. Le propathi ikumhlaba ophantse ube ngama-30 eesenti engqongwe ngamandongomane, ijackfruit, iPlantain neminye imithi emininzi. Apha kulapho abazali bam, uThankam & John bachitha khona iminyaka yokugqibela yobomi babo. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kunye nokujonga ubomi belali. Kukho ezinye iivillas ezimbini ezizimeleyo kwindawo enye-iThandam's Villa kunye ne-John's Villa.
Ngokufana nezindlu zakudala zaseKeralan, indlu yethu inamagumbi okulala amancinci kunye negumbi lokuhlambela. Nangona kunjalo, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela libanzi kwaye libanzi. Amakhaya ayesakhiwe ngendlela yokuba kulapho ngokuyintloko intsapho yayihlanganisana khona.
I-Foyer / hlala ngaphandle: Umgangatho owenziwe ngamathayile ngodongwe olubomvu oneendawo zokuhlala
Igumbi lokuhlala: Umgangatho ofakwe iithayile ngodongwe olubomvu, ifenitshala yakudala, Umculo wasemva ofihlakeleyo wesiNtu. Ukukhanya okonga amandla
Igumbi lokutyela: Umgangatho ofakwe iithayile ngodongwe olubomvu, itafile yokutyela enezihlalo ezi-6, isitya esingeyoplastiki kunye neglasi, izinto zokusika zentsimbi.
Igumbi lokulala: Akukho nto yomoya kodwa inomoya kwaye ingena umoya kwaye inefestile kumacala amabini, inokuthintela iingcongconi, umgangatho obomvu ofakwe ithayile, ikhethini kuzo zonke iifestile, 1 queen size(120 cm ) ibhedi enomandlalo wogwebu oyi-4, Ibhedi ezi-2, umqamelo & ikesi, ingubo, Ishelufu esecaleni kwebhedi, Iqonga lelaphu, Ithala leengcango eli-twin elinezixhoma zelaphu, Izitulo ezibini ezinetafile ephantsi, Impahla yokuhlamba impahla, isipili - ubude beenyawo ezi-4, Ibhaskithi yenkunkuma, itawuli yokuhlamba eyi-1 kunye netawuli yesandla enye ebonelelwe lundwendwe ngalunye.
Igumbi lokuhlambela: Amanzi abalekayo ancamatheleyo afumaneka iiyure ezingama-24, iitephu zokonga amanzi/ishawari, uhlobo lwaseNtshona lweWC enephepha langasese, njl.
Ikhitshi: Isikhenkcezisi, isinki yasekhitshini, i-cooker yokungenisa umoya, ingena umoya ngokupheleleyo enefestile kumacala amathathu, izixhobo ezicocekileyo, izixhobo zebakala lokutya, Izikhongozeli, inkunkuma emanzi neyomileyo eyahluliwe kwaye ilahliwe, ukucocwa ngokubulala iintsholongwane kwimigangatho.
Ungahlola ilali ngebhayisekile uphonononga amasimi epaddy, iitempile zalapha, iibhulorho, amachibi njalo njalo. Izithuthi zinqongophele kakhulu, ngoko akuyomfuneko ukuba uzikhathaze ngazo naziphi na iingozi.
Unokuzihlaziya ngamanzi okusela ahlaziyekileyo nomoya omtsha ongangcoliswanga. Le ndawo idume ngobuhle bayo bendalo kunye ne-bio-yantlukwano.
Kule dolophana yezolimo izolile, unokubona imithi yekhokhonathi eluhlaza, i-nut meg kunye nemithi yemango.
Le lali ye-agro ifumana amanzi amaninzi kumlambo waseChalakudy. Unokusebenzisana nabantu basekuhlaleni kwaye ujonge ubomi basemaphandleni-Ukulima umhlaba, ukuhlwayela irayisi, ukusenga iibhokhwe, ukugawula iinkuni, ukukha amanzi equleni, ukukhwela imithi nokufunda malunga nezityalo ezahlukeneyo zonyango. ilali.
Ngaphezu koko kubathandi be-adventure, kukho iindawo zokuhamba uhambo ezikufutshane onokuthi uzonwabele, kunye nokuphila ubomi basemaphandleni.
Igadi yeziqhamo ekufuphi elawulwa ngamaqela asekuhlaleni anceda abafazi baziwa ngeentlobo ngeentlobo zeplantain ezilinywayo.
Ngqina imisebenzi eyahlukahlukeneyo yabahlali
Indlela yesiko neyangoku yokukhwela umthi wekhokhonathi-ukukha iKhokhonathi, ubugcisa bokuluka amagqabi ekhokhonathi, ubugcisa bokwenza imitshayelo usebenzisa imithambo yamagqabi ekhokhonathi, ukulima ekhaya kunokukuqhelanisa nezityalo ezininzi ezifumaneka kulo mmandla kwaye ungcamle ekhaya. iziqhamo ezikhulileyo, Ukuloba ngeminatha yokuloba yemveli.
Nxibelelana nengcali yeVasthu Sasthram, Ingcali yePalmist, ingcali yeyoga, ingcali yeAyurvedic njl.
Ndingazenza ndifumaneke ngexesha lokuhlala kwakho. Nangona kunjalo, ndihlala eCochin, ngoko ubukho bam buya kulinganiselwa. Abamelwane bam, uViji noBenny, bayakuvuyela ukukunceda ngalo lonke ixesha.
Isidlo sakusasa sokwenyani saseKeralan siya kubonelelwa ngexabiso elithile. Ukutya kulungiswe ngemifuno neziqhamo zalapha ekhaya ezikhuliswe ngokwasemzimbeni. Unokukhetha into ongathanda ukuba nayo kuViji, ummelwane wethu umpheki.
Ndingazenza ndifumaneke ngexesha lokuhlala kwakho. Nangona kunjalo, ndihlala eCochin, ngoko ubukho bam buya kulinganiselwa. Abamelwane bam, uViji noBenny, bayakuvuyela ukukunceda n…